Fampandrosoana · Janoary, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Janoary, 2014
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Janoary, 2014
Azia Atsimo 17 Janoary 2014
Mbola olana goavana any India ny Toera-pikajiana ny fahasalamana sy ny fahadiovana rehefa mbola mangery ankalamanjana ny atsasaky ny mponina ao aminy. Miezaka ny UNICEF India amin'ny fanentanana #poo2loo ny hanao fanentanana amin'ity raharaha irailoha ity.
Boky Maimai-poana No Nanombohan'Ireo Mpianatra 37 Tapitrisa Ny Taona Vaovao Tao Bangladesh
Azia Atsimo 14 Janoary 2014
"Ity ny karazana Bangladesh tiantsika hananana…. Ankizy falifaly miaraka amin'ny bokiny vaovao ary mangetaheta fahalalàna….fa tsy Ankizy milalao vanja sy mianatra mitono olona"
Azia Atsinanana 08 Janoary 2014
Singam-baovao Tsara 7 Mety Mbola Tsy Henonao Momba an'i Yemen
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 07 Janoary 2014
Anivon'ireo vaovao mampalahelo sy mifono herisetra heno mikasika an'i Yemen, dia afaka nangady vaovao vitsivitsy izay mety tsy tratranao izahay.
Tolo-Kevitra Fitondrana Tsara Tantana 3 Ho An'i Repoblikan'i Afrikafovoany, Madagasikara ary Mali
Afrika Mainty 03 Janoary 2014
Indreto ny fepetra telo izay tsikaritry ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ireto firenena telo potika ireto hanombohana ny fananganana indray ny rafitra politika.
Mpiasan'ny Fanaovana Akanjo Ao Kambodza Mitokona Faobe Ho Fampakarana Ny Karama
Azia Atsinanana 03 Janoary 2014
An'arivony ny Kambodziana mpiasan'ny fanaovana akanjo no nandray anjara tamin'ny fitokonana faobe manerana ny firenena hampakarana ny karama. Maro amin'ny mpiasa ihany koa no roboka tamin'ny fihetsiketseha-panoherana karakarain'ny mpanohitra